Deyn cafinta Soomaaliya Guul u baahan in loo dabaaldego. - Horseed Media • Somali News
March 27, 2020Featured
Raysalwasaare Xassan Cali Kheyre iyo Agaasimaha IMF Kristalina Georgieva
.@KGeorgieva: I am proud to announce that Somalia’s commitments to economic reforms have paid off. Somalia will gain access to new financial resources to build a more resilient & prosperous future for its people. Congratulations on this historic milestone! https://t.co/LJy0EBxZUK pic.twitter.com/qBrYaTnsDw
Hay’addaha IMF iyo Baanka Adduunka ayaa isku raacey in Xukuumadda Soomaaliya ka soo baxdey shuruudihii loo baahnaa, sidaas darteedna, deynta laga soo dejiyey $5.2b, muddo saddex sano ah gudaheedna gebigeedaba la tirtiraayo. In Soomaaliya soo gaarto “decision point” ayaa alabaabada u furaya in dalku helo maalgelin caalami ah, si toos ahna ula macaamilo hay’adaha dhaqaalaha adduunka sida IMF iyo Baanka Adduunka iyo kuwo kale oo badan.
Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa si weyn loogu amaanaa isbeddelka weyn ee ay ku sameeyeen maaliyadda dalka, taas oo sababtey in dakhliga dalka soo gelayaa uu noqdo mid kor u kaca, oo uu yaraado musuq-maasuqo, lana bixiyo xuquuqda shaqaalaha iyo ciidanka.
Sanadkii 216 Dakhliga Dowladda ayaa ahaa 248 Milyan oo doolar, waxaana uu muddo 36 bilood ah kadib gaarey adduun ku dhaw Nus bilyan dollarka Maraykanka ah sanadkii. Dakhliga Dowladda u soo xerooda ayaa dib loogu habeeyey si hay’adaha caalamka ee deymaha ku leh ay ku qanceen, halka markii hore xitaa ay ka qayb-qaadan jireen soo ururinta dakhliga shirkado si gaar ah loo lee yahay. Dowladda Federaalka ayaa ka maarantey deymihii ay dib u geli jirtey si ay u maareyso kharashaadka ay dib u bixineyso.
Horseed Media oo xiriir la samaysey Sarkaal ka tirsan xafiiska Raysalwasaaraha isla markaana xubin muhim ah ka ah guddiga Soomaaliya uga shaqeynaayey Denyn cafinta Sharmaarke Maxamed Faarax ayaa u sheegay in qorshaha deyn cafintu uu yahay “Guushii Qarniga”, taas oo ay gaartey umadda Soomaaliyeed, kadib shaqo adag oo ku dhisan karti, adkeysi iyo hufnaan ah oo hoggaanka Raysalwasaare Xassan Cali Kheyre la yimid, caalamkana tusey in Soomaaliya ay ka soo bixi karto shardi kasta oo lagu xiro, Sharmaarke ayaa sheegay in dib u dhiska dalka ay hortaagneyd Balaayinta dollar ee deynta loogu lahaa, Qorshaha HIPC wixii ka danbeeya dalku u diyaar garoobayo dib u dhis horumar iyo koboc dhaqaale.
Raysalwasaaraha Xukuumadda Federaaliga ah ee Soomaaliya Xassan Cali Kheyre ayaa sheegay in shuradaha ku dhaw boqolka shardi ee lagu xiray ay kamid ahaayeen sameynta sharciyo toban gaareya kuwaas oo ay kamid ahaayeen Sharciga, Dakhliga, Maamulka maaliyadda, Iibka Qaranka, Isgaarsiinta, Batroolka, La dagaalanka musuqa iyo qaar kale kuwaas oo dhamaantood maanta ah sharciyo dalku iska lee yahay.
Sidoo kale Dowaldda Federaalka ayaa ´ guul ka gaartey dib u habeynta ciidanka Xoogga dalka, kuwaas oo loo sameeyey diiwaan gelin casri ah, waxaana ay kamid ahayd shuruudaha la iska doonaayey ka hor inta aan deynta la cafin. Raysalwasaaraha Xukuumadda federaalka Soomaaliya Xassan Kheyre ayaa sheegay in guusha deyn cafinta ay ka fa’iideysan doonaan Ganacsatada Soomaaliyeed oo heshiis la geli kara maalgashadayaal caalami ah, sidoo kale Banigaya dalka ayaa si toos ah ula tacaamuli doona Baananka adduunka.
Inkasta oo barnaamijkan mar sii horeysey bilowdey ayey dowladihii hore Soomaaliya soo mara ku adkaatey in ay buuxiyaan shuruudaha la iska doonaayo. Sababaha ugu weyn ee Xukuumadda Jamhuuriyaddu ugu guuleysatey ayaa ah, xasilooni siyaasadeed oo ay heshey, taas oo wiiqi jirtey kuwii ka horeeyey, iyo Raysalwasaare Xassan Cali Kheyre oo geliyey wakhti aad u badan sidii dalka looga samatabixin lahaa deymaha la degey ee u diidey hormarka.